Wararka - 22-ka Hortiflorexpo IPM Beijing Sebtember 16-18 2020
Kooxda iibka ee Zhengchida ayaa ka soo qayb gashay 22nd Hortiflorexpo IPM Beijing Exhibition inta lagu guda jiro Sebtember 16-18th, 2020. Xafladii furitaanka waxay ahayd daawasho wanaagsan.
Sababtoo ah convid-19, kani waa 1st iyo kaliya bandhig aan kaqeyb galnay sanadkan, laakiin waxaa lagu magacaabi karaa guul weyn. Waxaa na soo booqday in badan oo ka mid ah iibsadayaasha gudaha oo ka imanaya warshadaha soo gooya, kuwa gada suuqyada, iyo shirkadaha ganacsiga. Inta badan iibsadayaasha ajaanibta waxay ka yimaadeen Koonfur-bari Aasiya, sida Kuuriya, Japan, iyo Thailand. Saddexda maalmoodba, qolkeennu waxa ka buuxay dad oo raggeennu mashquul bay ku ahaayeen.
Waxaan soo bandhignay alaabteena ugu dambeysay iyo buugaagta. Macaamiil badan ayaa u muujiyey dano weyn alaabtayada caleemaha lagu jaro, caleemaha wax lagu jaro, garbaha wax lagu gooyo, garbaha hareeraha iyo mindiyo jilicsan. Waxaa soo jiitay alaabteena habeysan, noocyo kala duwan oo buuxa, MOQ hooseeya iyo xirfad-yaqaannimo, qaar iyaga ka mid ah xitaa waxay heshiis nala galeen waabkii. Dhamaadka bandhigga, waxaan helnay in ka badan 100 kaararka ganacsiga.
Waxaan sidoo kale la kulanay macaamiil badan oo daacada noo ah. Waxaan ka wada hadalnay amarrada, wadaagnay guulaha cusub, waxaan ka wada hadalnay qorshooyin cusub, waxaanna is dhaafsannay fikradaha ku saabsan isbeddellada warshadaha. Waad ku mahadsan tahay macaamiisheenna wanaagsan, in Zhengchida ay lahaan karto koritaan joogto ah oo sannado ah. Waxaan sii wadi doonaa bixinta taageerada xirfadeed iyo hagaajinta adeegeena si aan u ilaalino xiriirka ganacsi ee muddada dheer iyo saaxiibtinimada.
Waxaan rajeyneynaa in dadka ka kala yimid dalal kala duwan ay si wadajir ah ugu midoobaan la dagaallanka cudurka loo yaqaan 'Convid-19', oo cudurku uu baabi'iyo mustaqbalka hore. Markaa waxaan dib u bilaabi karnaa kaqeybgalka bandhigyo badan, sida Spoga + Gafa, GIE EXPO, iyo Canton Fair gudaha iyo dibaddaba, si aan ugu soo bandhigno caleemaha goynta dadka ka kala yimid meelo kala duwan oo adduunka ah. Waxaan aaminsanahay in ku tiirsanaanta tayada, adeegga, khibrada iyo heerka qiimaheena, aan si fiican u naqaano oo aan u jeclaan doono macaamiil aad iyo aad u tiro badan.